Wefti 11 xildhibaan ah oo ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland oo galabta u dhoofay dalka Ingiriiska | Somaliland.Org
January 31, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Wefti ka kooban 11 Xildhibaan oo ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland ayaa maanta ka ambabaxay dalka, iyaga oo u kicitimay dalka Ingiriiska.
Weftigan Xildhibaanada ah oo ka tirsan Guddi ka kooban 3da xisbi Qaran oo dhowaan Shirguddoonka Golaha Wakiilladu magacaabay, loona xilsaaray xidhiidhka Baarlamaanada adduunka iyo aqoonsi-raadiska Somaliland, waxa ay ku baxeen martiqaad ay ka heleen koox ka tirsan Baarlamaanka Ingiriiska oo taageera Somaliland. Waxayna sheegeen inuu qayb ka yahay dedaalka ballaadhan ee dowlad iyo shacabba loogu jiro aqoonsiga Somaliland.
Guddidan oo ka kooban 15 xubnood, laguna magacaabo Cross-Party Parliamentary Group, waxa hoggaaminaya xildhibaan Xuseen Maxamed Cige, isla markaana xubno ka tirsan guddida ayaa kaga sii horreeya Yurub.
Weftigu intii aanay galabta ka dhoofin madaarka Caasimadda Hargeysa, warsaxaafadeed ku saabsan socdaalkooda oo ay soo saareen waxay sheegeen in safarkoodu uu daba socdo booqasho uu dalka ku yimi wefti ka socda Baarlamaanka Ingiriiska oo uu horkacayey Hon. Alun Michael, isla markaana ka tirsan Koox Mudanayaal ah oo lagu magacaabo All-Party Parliamentary Group for Somaliland, kooban labada Aqal ee Baarlamaanka dalkaas, kuwaas oo isu bahaystay meel-marinta qaddiyadda Somaliland.
Waxana uu intaa ku daray warsaxaafadeedku in xubno ka tirsan Guddida kulan ay kula yeesheen Aqalka Baarlamaanka Ingiriiska (House of Commons) Guddida Baarlamaanka Ingiriiska ay iskula qaateen in lagu martiqaado Baarlamaanka Ingiriiska guddida CPG ee Somaliland, halkaas oo uu sheegay inay kula kulmi doonaan Guddida Baarlamaanka Ingiriiska ee APG, isla markaana ay wada qaban doonaan hawlo badan oo danaha Somaliland ah, sida Ictiraaf-raadinta iyo horumarinta.
Waxa kale oo uu guddidu warsaxaafadeedkooda ku sheegeen in muddada ay socdaalka ku joogaan Ingiriiska ay fursad u heli doonaan inay la kulmaan jaaliyadda Somaliland ee UK, isla markaana ay kala hadli doonaan sidii qof wal oo reer Somaliland ahiba meesha uu jooga uga hawlgeli lahaa aqoonsi raadiska Somaliland.